मधेशको आर्थिक उन्नतिको आधार कृषि - मधेश लाइभ
गृह पृष्ठ » विचार » मधेशको आर्थिक उन्नतिको आधार कृषि
२०७७ पुष ८ गते २१:२८ मा प्रकाशित
मैले दैनिक रुपमा ४०–५० जनाको हराहारीमा काम दिएको छु । उहाँहरुलाई दैनिक खानामा, दाल, भात, दुई ओटा तरकारी अचारसहितको भोजनको व्यवस्था गरेको छु । यो निमुखा जनताहरु हाम्रै मधेशका दलितहरु हुन् । उहाँहरु मध्ये धेरै जना सुकुम्बासीहरु छन् । उहाँहरुलाई मैले जेष्ठ १५ गतेबाट रोजगारी दिएको छु । आज उहाँहरुको सुखदुःख को साथि मैले नै बनेको छु ।
वाचा गर्ने नेताहरु त एक चोटि उहाँहरुको घरमा यस्तो कोरोनाको बेलामा पनि अलि अलि राहत त दिए हुन्थ्यो नि । राजनीतिको नाममा जति पनि दलहरु छन् त्यो दल हो कि दलाल हो कुरो बुझ्न नि गाह्रो । आज म एक जना व्यक्तिले दुई सय जनालाई रोजगारी दिने सोचमा छु । म जस्तो १० प्रतिशत युवाले मधेशमा नै रोजगारीको सर्जना गरियो भने के मधेश समृद्ध हुदैन र ? कि राजनीति मात्रै एउटा विकल्प छन् ? राजनीति एउटा गरिखाने भाडो मात्रै हुन् । हामी जस्तो कति युवा विदेशमा छन् त्यो रहरले हैन, बाध्यताले हो । हामी युवाहरु अब आफ्नै माटोमा समृद्धिको फुल फुलाउनु पर्छ ।
मैले तीन वर्षको लक्ष्य लिएको छु । अहिले म रौतहटमा कृषि कर्म गरिरहेको छु र महोत्तरीमा पनि सुरु गर्ने तयारीमा छु । रौतहटमा मैले दुई हजार लोकल हाँस, कुखुरा, माखा पालन, ५० वटा गाई, ५० वटा भैंसी, पाँच बिघामा मेवा, पाँच बिघामा अम्बा, पाँच बिघामा केरा, पाँच बिघामा सुन कागती लगायतको खेती छिट्टै नै सञ्चालन गर्न गइरहेको छु । मसँग अहिले ५० जनाको टिम छ ।
रौतहटमा सफल भइसकेपछि मैले आफ्नो टिमबाट मधेशका हरेक जिल्लामा पाँच–पाँच जना पठाएर मधेशभरि नै कृषि क्रान्ति ल्याउँछु । अहिले महोत्तरी र रौतहटमा तरकारी खेती, धान लगायत उब्जनी गरिरहेको छ, अब दोस्रो चरणमा फेरि पाँच वटा जिल्लामा सुरु गर्ने योजनामा छु । त्यसपछि तेस्रो चरणमा मधेशका सबै जिल्लामा यस्तै प्रकारका खाद्यान्न उब्जनीका लागि योजनाबद्धरुपले सञ्चालन गर्नेछु ।
किनभने त्यहाँबाट मेरो आम्दानीको स्रोत पनि बढ्छ र बैंकरहरुले पनि पत्याउने आधार हुन्छ । मधेशमा खेती गर्नका लागि सिंचाइको समस्या छैन । आफ्नो लगानीमा गरियो भने बोरिङ्ग, डीप बोरिङ्ग लगाएर गर्न सकिन्छ । मधेशमा जति पनि पानी छन् । (यादव एभरेष्ट कृषि फर्म प्रालिका अध्यक्ष हुन् ।)) मधेश दर्पण फिचर सेवा
गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल: छ [...] Next
विश्वभर ७ करोड ९० लाखभन्दा [...]